» सडक विस्तार र हेटौंडाको भविष्य
सडक विस्तार र हेटौंडाको भविष्य
५ श्रावण २०७६, आईतवार ०६:०२
मकवानपुरको हेटौंडा विभिन्न बहसले बेला बेलामा तात्ने गर्छ । अहिले प्रदेश ३ को राजधानी भएका कारण यस सवालसंग जोडिएर आउँने विभिन्न कुरामा हेटौंडाको चर्चा हुन्छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले दुई वर्षपछि पुनः हेटौंडाको सडक विस्तार कार्य सुरु गरेकोप्रति अहिले विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । पटक पटक सडक भत्काउँने अनि फेरी रोक्ने कार्यले हेटौंडालाई जिस्काइ रहेको अनुभूति भएको छ । किनभने वि.सं.२०७४ पुसमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौंडा बजारका केही संरचना भत्काएपछि सडक विस्तार कार्य रोकिएको थियो। अहिले फेरी सडक विस्तार गर्न थालेकोप्रति पनि कति दिनलाई हो भन्ने विभिन्न लख काटिएको छ । वि.सं.२०७३ सालमा हेटौंडामा थालिएको सडक विस्तारको कार्य विभिन्न कारणले स्थगित भएको थियो । घरधनी तथा व्यवसायीको स्थानीय आन्दोलन र सडक सीमाभित्र पर्ने घरधनीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल सडक विस्तार कार्य अगाडी नबढाउन आदेश दिएपछि हेटौंडाको सडक फराकिलो बनाउँने अभियान रोकिएको थियो ।
सडक विस्तारसंग हेटौंडाका विभिन्न सम्भावनाका विषयमा चर्चा गरिन्छ । फराकिलो शहर नहुँदा प्रदेश ३ को राजधानी कसरी स्थायी कायम हुने ? सडक फराकिलो नहुँदा अहिलेको सवारी जाम, साँघुरो सडकमा कसरी हेटौंडाको ट्राफीक व्यवस्थापन खोज्ने ? अहिलेको सडकमा हेटौंडाको भविष्य कसरी खोज्ने ? यी विभिन्न प्रश्नको जवाफ हेटौंडाको विकाससंग सम्बन्धित छ अहिले जब हेटौंडाको विकास वा समृद्घिको जब कुरा गरिन्छ तब सडक विस्तारको कार्यको विषय आइहाल्छ । अहिलेको साँघुरो हेटौंडामा विकास सम्भव नहुने भएकाले सडक विस्तार कार्यलाई प्राथमिकताका साग अगाडी बढाउँनुपर्छ । सडक डिभिजन कार्यालयले छैठौं पटक १५ दिने सूचना जारी गर्दै मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकास्थित लोथर बजार र बाराको अम्लेखगञ्जबाट २५ मिटर सडकभित्र पर्ने घर टहरा भत्काउने काम सुरु गरेको छ । तर फेरी पनि स्टे अर्डरका कारण सडक विस्तार कार्य रोकिने हो की भन्ने चिन्तामा हेटौंडाका विकासप्रेमी छन् । विगतमा पनि सडक विस्तार कार्य अब रोकिदैंन भनिएको थियो । रोकिदै राकिदै यहाँसम्म आइपुगेको सडक विस्तार कार्यलाई अब निरन्तर अगाडी बढाउँनु आवश्यक छ ।
सडक विस्तारको अभियानलाई रोक्न नमिल्ने २५ मिटर घर पर्ने व्यक्तिको भनाई छ । तर उनीहरुको एउटै चाहना छ – की घर भत्काउँदा मुआब्जा चाहिन्छ । यसमा व्यवसायीको संस्था मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघ, केही व्यक्ति सडक विस्तार कार्य गर्ने भए १६ मिटरमा गर्ने हो अन्यथा मुआब्जा चाहिन्छ भनिरहेका छन् । सडक डिभिजनले हेटौंडाका संरचनालाई पहिल्यै मुआब्जा दिइसकेको जनाएको छ भनिरहेको छ भने सडक विस्तारको विरोधमा रहेकाले पहिल्यै मुआब्जा नपाएको बताइरहेका छन् । यो यथार्थता कसरी, कसले पत्ता लगाउँनुपर्ने हो एउटा यो विषयको बहस पनि चलाउँनुपर्छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले २५ मिटर सडक विस्तार गर्दा क्षति पुग्ने संरचनाबारे तथ्याङ्क सङ्कलन पनि गरेको थियो । सडक विस्तार गर्दा हेटौंडा १५, रातोमाटेदेखि हेटौंडा १० स्थित राप्तीपुलसम्म र हेटौंडा २, चौकीटोलदेखि हेटौंडाको बुद्धचोकसम्म दुई हजार आठ सय घर २५ मिटरभित्र पर्ने उद्योग वाणिज्य संघले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क छ । यी संरचनामा करिब चार हजार व्यवसाय सञ्चालन रहेको उद्योग वाणीज्य संघको भनाई छ । सडक विस्तारसंग हेटौंडाको भविष्य जोडिएकाले अब कुनै कारण पनि सडक विस्तार रोकिनु हुन्न ।